mampatahotra Castle ho levona mandrakizay ny loza tokoa ny amin'ny ezaka mba hampitahorana anao, fa fa mahafatifaty ny mijery biby goavam-be miaraka ny mety hisian'ny fandraisana 3,247 indraindray tokoa ny tsatòka iray mampiala voly ataovy slot finday trano filokana lalao.
Momba ny Developer ny mampatahotra Castle
naorina in 2014, Chance dia orinasa vaovao, fa ny orinasa izay nanao mampanantena voalohany eo amin'ny sehatry ny aterineto lalao amin'ny alalan'ny fampivelarana ny sasany sy ny endri-javatra tena Chic-manan-karena amin'ny aterineto lalao. izany slot finday trano filokana lalao dia anankiray aza tahaka itony lalao mandroso Noho ny Kisendrasendra (NYX).
izany slot finday trano filokana lalao tonga miaraka dimy reels sy ny lalao dia nilalao tamin'ny 25 paylines. Fa ireo kosa dia paylines tsy raikitra ary azo nitombo na nihena toy ny isan-ny safidy. Ny vola izay miloka ao amin'ny tsirairay ihany koa kofehy ireny tsy raikitra ary nanomboka avy 25p ny £ 625 isan-kofehy ireny. izany slot finday trano filokana lalao azo nilalao tamin'ny fitaovana maro toy ny iOS, Android, ary mazava ho azy sy ny solosaina findainy PCs. Manana biby goavam-be efatra samy hafa amin'ny tantara an-tsary fomba sarimiaina teo amin'ny efijery. Izy ireo Ballie, vato, Tally sy Squido. Misy ny sasany karatra fitsipika fanehoana an'ohatra avy 9 mba Ace koa dia misolo tena ny kely karama ny marika. Ny famantarana ny lalao dia ny aelezo mariky ny lalao. Ho hitanao koa ny bibidia tsy tapaka teo amin'ny efijery izay manolo zavatra hafa afa-tsy ny mariky aelezo.
Ny endri-javatra hafa ity slot finday trano filokana lalao dia:
Random Monster tampon-tanety- Izay mety ho ny efatra afaka manova ny tenany biby goavam-be any an-tsapaka an'ala nandritra ny lalao fototra. Afaka manana olona maro araka izay kisendrasendra efatra tampon-tanety ao amin'ny base lalao. Ny kisendrasendra tampon-tanety koa hisolo sariohatra fototra hafa mba hanome anareo ambony payouts.
Mampatahotra Spins Feature- Landing telo na mihoatra ny aelezo marika na aiza na aiza ao amin'ny fomba fijery tamin'izany andro izany no hanombohany izany endri-javatra. Aelezo ny isan'ny sary famantarana izay nanomboka azy io no hamaritra ny isan'ny maimaim-poana spins azonao.
3 manahaka no hamaly soa anao amin'ny 10 free spins
4 manahaka no hamaly soa anao amin'ny 12 free spins
5 manahaka no hamaly soa anao amin'ny 15 free spins
Alohan'ny manomboka milalao ny maimaim-poana spins tokony hifidy varavarana avy amin'ny varavarana enina nanatrika teo amin'ny efijery hamotsotra ny niafina biby goavam-be. Izany dia foana mandra efa nahita ny efatra na biby mandra hitanao ny mampatahotra spins ambadiky ny varavarana, rehefa ny endri-javatra dia hanomboka. Ary ny biby goavam-be no navotsotra hivadika ho tampon-tanety nandritra ny fisian'ny ny endri-javatra.
mampatahotra Castle dia mahafinaritra-feno-biby goavam-be avy any Chance nanana lohahevitra slot Interactive. Ny slot dia rehetra momba ny kisendrasendra tampon-tanety sy ny mampatahotra spins izay ahafahanao mahazo payouts lehibe.